स्क्रबटाइफसः डेढ महिनामा ८ बालबालिकाको मृत्यु « Nagarik Khabar
स्क्रबटाइफसः डेढ महिनामा ८ बालबालिकाको मृत्यु
प्रकाशित मिति : 15 September, 2021 7:03 am
काभ्रे । स्क्रबटाइफसका कारण धुलिखेल अस्पतालमा डेढ महिनामा ८ बालबालिकाको ज्यान गएको छ । अगस्ट ८ देखि सेप्टेम्बर १२ सम्म भर्ना भएका २२ बालबालिकामध्ये ८ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । निधन हुनेमध्ये ६ बालिका र २ बालक छन् । अधिकांश १४ वर्ष उमेर समूहभन्दा कमका छन् ।
‘स्क्रबटाइफसका कारण बालबालिका संक्रमण हुने र मर्ने क्रम अत्यधिक भएको छ’, धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ डा. सिर्जना डंगोलले भने, ‘संक्रमण भई अस्पतालमा आएकामध्ये ४० प्रतिशत बालबालिक मृत्युको मुखमा पुगेका छन् ।’
‘पछिल्लो ७ दिनमा २ बालबालिकाको निधन भएको छ’, डा. सिर्जना डंगोलले भने, ‘समयमै अस्पताल नआउँदा बिरामी ल्याएको २४ घण्टा पुग्न नपाउँदै निधन भयो ।’ अस्पतालमा अहिले एक जना आईसीयूमा छन् भने २ जना सामान्य वार्डमा उपचारार्थ छन् ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष स्क्रबटाइफसका कारण निधन हुने संख्या बढेको डा. डंगोलले बताए । अघिल्लो वर्ष जुलाईमा ८ जना, अगस्टमा २१ जना, सेप्टेम्बरमा ८, अक्टोबरमा २, नोभेम्बरमा २ जना स्क्रबटाइफसबाट संक्रमति भएको भए पनि निधन हुनेको संख्या न्युन थियो ।
स्क्रबटाइफसका बिरामी बढेसँगै स्थानीय सरकार तथा स्वास्थ्य कार्यालयसँगको समन्वयमा सचेतना कार्यक्रम शुरु गरिएको डा. डंगोलले बताए । जनावर तथा ओसिलो स्थानमा पाइने किर्नालाई मुुसाको माध्यमबाट व्यक्तिको शरीरमा फैलने भएकाले मुसाबाट बच्न र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
अस्पतालका मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट सुरेन्द्रकुमार मधुपले धुलिखेल अस्पतालमा परीक्षण गरिएका १ सय ५० मध्ये ३४ जनाको तीन महिनाको अवधिमा पोजेटिभ देखिएको बताए । पोजेटिभ देखिनेमा बालबालिका धेरै छन् । डा. प्रकाश सापकोटाले स्क्रबटाइफसका बिरामी सातामा १, २ जना आउन थालेको बताए । स्क्रबटाइफसको लक्षण देखिएर पनि समयमै उपचार नहुँदा किड्नी, फोक्सो र दिमागमा असर पुर्‍याई व्यक्तिको निधन हुन पुग्ने डा. प्रकाश सापकोटाले बताए ।
स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. नरेन्द्रकुमार झाले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्क्रबटाइफसका बिरामी देखिन थालेकाले स्थानीय पालिका र नागरिक सचेत रहनुपर्ने बताए । कान्ति बाल अस्पताल, चितवनको भरतपुर अस्पतालमा पनि स्क्रबटाइफसका बिरामी देखिन थालेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा मोतीराम तिमल्सिनाले लेखेका छन ।
डेढ महिनामा ८ बालबालिकाको मृत्यु
मेलम्ची तत्काल पुनर्निर्माण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ
रोजगारी गुमेपछि ६ लाख नेपाली फर्किए